ल हेर्नुहोस् ! नेपालमै जागिर गरेर दैनिक ५७ हजार तलबभत्ता — Arthatantra.com
Arthatantra.com > अन्य > ल हेर्नुहोस् ! नेपालमै जागिर गरेर दैनिक ५७ हजार तलबभत्ता
काठमाडौं । नेपालमै जागिर गर्नेले दैनिक रु ५७ हजार तलबभत्ता पाउने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भुवन दाहालले तलबभत्ता बापत दैनिक रु ५७ हजार ९३ तलब भत्ता पाउने गरेको सार्वजनिक भएको हो ।
दाहालले गत आर्थिक वर्षमा तलबभत्ता र सेवा सुविधा गरी बैंकबाट २ करोड ८ लाख ३९ हजार रुपैयाँ लिएका थिए । उक्त रकमलाई मासिक रुपमा हिसाव गर्दा १७ लाख ३६ हजार ५ सय ८३ र दैनिक रुपमा हेर्दा ५७ हजार ९३ रुपैयाँ हुन्छ ।
आयबापत गत वर्ष राज्यलाई ३६ प्रतिशत कर तिरेका सीइओ दाहालले सरकारलाई गतवर्ष ७० लाख रुपैयाँ कर तिरेका छन ।
बैंकका अन्य कर्मचारीले पनि राम्रो तलबभत्ता पाउँछन ।
माथिल्लो तहका कर्मचारीले ४/५ लाखसम्म र तल्लो तहका कर्मचारीले ३५र४० हजार रुपैयाँ पाउने बैंकले जनाएको छ ।बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार गतवर्ष कर्मचारीहरुका लागि तलबभत्ता, बोनस र अन्य सुविधा गरी गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २५ करोड ९७ लाख ६७ हजार ७ सय ३५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
बैंकमा गत असार मसान्तसम्ममा ९ सय ६२ जना कर्मचारी थिए । गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब २६ करोड खुद नाफा कमाएको सानिमाले सेयरधनीहरुलाई १० प्रतिशत वोनस शेयर र ११ दशमलव ०५२६ प्रतिशत नगद लाभांश प्रदान गरेको छ ।
२०७६ असोज ३० गते प्रकाशित
२०७६ असोज ३० गते १४:१६ मा प्रकाशित
बैंकका जागिरे मालामाल : सिइओको तलबभत्ता दैनिक ७५ हजार, अन्य तहका कर्मचारीको कति ?
नेपाली फिल्म चोरेका शिरिष कुन्दरले नेपालीलाई लगाएर मानहानीको मुद्दा !
तामाकोशीकोे आइपिओमा ६ हजारको दोहोरो आवेदनकर्ताले सेयर नपाउने
तयार हुनुस्, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ल्याउँदैछ ३ लाख कित्ता सेयर !